Semalt कुराकानी लगभग5बिभिन्न तरिकाहरू अफलाईन प्रयोगको लागि सम्पूर्ण वेबसाइट डाउनलोड गर्न
कहिलेकाँही हामीसँग अफलाइन हुँदा साइट सामग्रीमा पहुँच हुन आवश्यक हुन्छ। यसको लागि हामीले यसको फाईलहरू जगेडा गर्नुपर्दछ, तर प्रायः होस्टिंग सेवाहरूले यो विकल्प प्रदान गर्दैनन्। हामी एक लोकप्रिय साइट को संरचना को नकल गर्न चाहन सक्छौं, साथै यसको CSS वा HTML फाईलहरू कस्तो देखिन्छ भनेर पत्ता लगाउन। जे भए पनि केस अफलाइन पहुँचका लागि सम्पूर्ण वेबसाइट डाउनलोड गर्ने विभिन्न तरिकाहरू छन्। तल सूचीबद्ध कुनै एक उपकरण प्रयोग गरेर, तपाईं विश्वासका साथ सम्पूर्ण साइट वा आवश्यक पृष्ठहरूको संख्या डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। जब तिनीहरूलाई प्रमाणीकरणको आवश्यक पर्दछ, तपाईं उनीहरूको नि: शुल्क संस्करणहरूको लागि अप्ट इन गर्न सक्नुहुन्छ र प्रीमियम योजनाहरूको लागि केही भुक्तान नगर्न। यी उपकरणहरू विशेष रूपमा स्टार्टअपहरू र मध्यम आकारका व्यवसायहरूका लागि उपयुक्त छन्।
HTTrack एक प्रख्यात कार्यक्रम वा एक सम्पूर्ण वेबसाइट डाउनलोड गर्न सफ्टवेयर हो। यसको प्रयोगकर्ता-मैत्री र आधुनिक ईन्टरफेसले प्रयोगकर्ताहरूको कार्यको सुविधा प्रदान गर्दछ। तपाईंले भर्खर साइटको यूआरएल घुसाउनुपर्दछ जुन तपाईं स्क्र्याप गर्न चाहानुहुन्छ र यसलाई अफलाईन पहुँचका लागि डाउनलोड गर्नुहोस्।
तपाईं या त पूरा वेबसाइट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ वा धेरै पृष्ठहरू हाइलाइट गर्न सक्नुहुनेछ तपाईंको हार्ड ड्राइभमा स्वचालित रूपमा डाउनलोड गर्न। तपाईंले डाउनलोड गर्नका लागि कतिवटा समवर्ती जडानहरू खोल्न चाहनुहुन्छ भनेर पनि निर्दिष्ट गर्नुपर्दछ। यदि एक विशिष्ट फाइल डाउनलोड गर्न धेरै समय लाग्छ भने, यो तुरून्त प्रक्रिया रद्द गर्न सम्भव छ।
गेटलफ्ट एक तुलनात्मक रूपमा नयाँ र आधुनिक प्रोग्राम हो जुन धेरै सुविधाहरू र प्रयोगकर्ता-अनुकूल ईन्टरफेसको साथ छ। एकचोटि डाउनलोड गरीएको र सुरू गरेपछि तपाईले सुरू गर्न "Ctrl + U" थिच्नु पर्छ। URL प्रविष्ट गर्नुहोस् र निर्देशिकाहरू बचत गर्नुहोस्। डाउनलोड सुरू हुन अघि, गेटलफ्टले तपाईंलाई सोध्नेछ कि कति फाइलहरू डाउनलोड गर्न चाहानुहुन्छ र त्यसमा पाठ र छविहरू समावेश छन् कि भनेर। एकचोटि डाउनलोड पूर्ण भएपछि हामी पूर्ण वेबसाइट अफलाइन पनि ब्राउज गर्न सक्दछौं।
पृष्ठनेस्टका सुविधाहरू गेटलफ्ट र एचटट्राक जस्ता छन्। तपाईंले वेबसाइट ठेगाना प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ र यसलाई तपाईंको हार्ड ड्राइभमा डाउनलोड गर्नुपर्नेछ। प्रयोगकर्ताहरूलाई वेबसाइटको नाम जस्ता आवश्यकका लागि सोधिएको छ र जहाँ यो बचत गर्नुपर्दछ। तपाईले चाहेको विकल्पहरू पनि छनौट गर्न सक्नुहुनेछ र यसको सेटिंग्स समायोजित गर्नुहोस्।
Cy. साइटटेक वेबकोपी
साइटेक वेबकोपीको साथ तपाईले प्रमाणिकरणको लागि पूर्वनिर्धारित पासवर्डहरू प्रयोग गर्नु पर्छ। तपाईं यो नयाँ प्रोग्रामको साथ नियमहरू पनि सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ र अफलाईन प्रयोगको लागि तुरुन्तै सम्पूर्ण साइट डाउनलोड गर्नुहोस्। डाउनलोड गरिएको साइटको कुल आकार र फाईलहरूको कुल संख्या तपाईंको डेस्कटपको दायाँ कुनामा देखाइएको छ।
Wikipedia. विकिपेडिया डम्पहरू
विकिपेडियाले हामीलाई सामान्य उपकरणहरू जस्तै Import.io र किमोनो ल्याबहरू अफलाईन प्रयोगका लागि डाउनलोड गर्न डाटा प्रयोग गर्न सल्लाह दिदैन। यसको सट्टा, यसले सँधै विकिपेडिया डम्पहरूलाई सिफारिश गर्दछ किनकि यो कार्यक्रमले गुणस्तर परिणामहरू सुनिश्चित गर्दछ। तपाईं XML ढाँचामा सम्पूर्ण वेबसाइट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ, डाटा निकाल्दै जुन तपाईंको वेबसाइट वा अनलाईन व्यापारको लागि लाभदायक छ।